गलकोट, २९ पुस । आगामी माघ १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म बागलुङमा मेयरकप फुटबल आयोजना हुने भएको छ । बागलुङ नगरपालिकाको आयोजना र जिल्ला फुटबल सङ्घको संयोजनमा राष्ट्रियस्तरको मेयर कप फुटबलको आयोजना गर्न लागिएको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “खेलको प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक पर्यटक बागलुङ ल्याउने हाम्रो मनसाय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेलकूदबाट बागलुङलाई चिनाउन राष्ट्रियस्तरको मेयरकप […]
पोखरा, २८ पुस । मुख्यमन्त्री कप गण्डकी प्रदेशस्तरी फुटबल प्रतियोगितामा ११ जिल्लाले सहभागिता जनाउने भएका छन् । माघको पहिलो सातादेखि शुरु हुने प्रतियोगतामा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाले भाग लिने एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले जानकारी दिनुभयो । लिग कम नक आउटका आधारमा सञ्चालनमा हुने प्रतियोगितामा जिल्लाका लिग बिजेता टोली होराइजन क्लब (श्याङ्ज), भिमाद युथ क्लब( […]
काठमाडौँ, २५ पुस । नेपाल पुलिस क्लब र आयोजक न्यू डायमण्ड यहाँ जारी होङ्गवान्जी न्यू डाइमण्ड कप राष्ट्रिय खुला महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । नयाँ बसपार्कस्थित ढोरपाटन भलिबल क्लबको खेल मैदानमा बिहीबार भएको खेलमा पुलिसले ढोरपाटन क्लबलाई ३–० सेटले पराजित गरेको हो । पुलिसले ढोरपाटनमाथि २५–१२, २७–२५ र २५–१० अङ्कको जित निकाल्यो […]
काठमाडौँ, २४ पुस । यहाँ जारी महानगर कप महिला भलिबलको उपाधिका लागि आज ललितपुर महानगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिका भिड्ने भएका छन् । ललितपुरले गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई ३–० सेटले तथा चन्द्रागिरिले विदुर नगरपालिकालाई ३–० सेटले नै पराजित गर्दै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन् । ललितपुरको जाउलाखेलस्थित जाउलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा बुधबार भएको सेमिफाइनल खेलमा ललितपुरले गोकर्णेश्वरलाई २५–१३, […]
काठमाडौं, २३ पुस । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा थ्रीस्टार क्लबले ब्रिगेड ब्वाइज क्लबलाई पराजित गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको पहिलो खेलमा थ्रीस्टार ब्रिगेड ब्वाइज क्लबलाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । थ्रीस्टारको जीतमा सुशान्त श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ र विदेशी खेलाडी वासिउ ओलादिरान हाजमातले एक एक गोल गरे […]
महानगर कप भलिबल : ललितपुर र चौतारा क्वाटरफाइनलमा
काठमाडौँ, २२ पुस । ललितपुर महानगरपालिका र चौतारा नगरपालिका यहाँ जारी महानगर कप पुरुष तथा महिला भलिबलअन्तर्गत पुरुषतर्फको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । ललितपुरको जाउलाखेलस्थित जाउलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा सोमबार भएको खेलमा चौतारा नगरपालिकाले भक्तपुर नगरपालिकालाई ३–० सेटले पराजित ग¥यो । चौताराले भक्तपुरलाई २५–१४, २५–२१ र २५–२१ अङ्कले हराएको हो । समूह ‘ए’ मा रहेको […]
काठमाडौँ, १८ पुस । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको चौथो चरणका खेल सकिँदासम्म मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब शीर्ष स्थानमा छ । चार खेलमा तीनमा जीत तथा एक खेल बराबरी खेल्दै मनाङ १० अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको हो । तेस्रो चरण सकिँदासम्म शत प्रतिशत नतिजा निकालेको मनाङ चौथो चरणमा फ्रेन्डस् क्बलसित १–१ को बराबरी […]
सागमा स्वर्ण विजेता सम्मानित
काठमाडौँ, १७ पुस । नेपालमा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गत बक्सिङ खेलमा स्वर्णपदक विजेता खेलाडीलाई आज नगदसहित सम्मान गरिएको छ । सागअन्तर्गत बक्सिङ खेलमा नेपालले तीन स्वर्णपदक जितेको थियो । जसमा भूपेन्द्र थापामगर, सुनिल शाही र मिनु गुरुङले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाउनुभएको थियो । उहाँहरुलाई राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रमेश […]
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग: जाउलाखेलद्वारा च्यासल पराजित
काठमाडौँ, १५ पुस । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई पराजित गर्दै विजयी भएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ) कम्प्लेक्समा भएको खेलमा जावलाखेलले च्यासललाई २–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । जीतसँगै जावलाखेल लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । […]
शहीद स्मारक ए: मच्छिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा
काठमाडौँ, १४ पुस । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगअन्तर्गत चौथो चरणको पहिलो खेलमा मच्छिन्द्र क्लबले न्युरोड टिम (एनआरटी) लाई पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) कम्प्लेक्सको खेलमैदानमा आज भएको खेलमा मच्छिन्द्रले एनआरटीलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लेको हो । मच्छिन्द्रको जीतमा विदेशी खेलाडी एडिलाजा […]
काठमाडौँ, १४ पुस । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तेस्रो चरणका खेल सकिँदासम्म मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब शीर्ष स्थानमा छ । तीन खेलमा शतप्रतिशत नतिजा निकाल्दै मनाङ नौ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । दुई खेलमा जीत र एक खेलमा बराबरी खेलेको थ्रीस्टार सात अङ्कसहित लिगको दोस्रो स्थानमा छ । दुई खेलमा जीत र एकमा […]
१३ पुस, काठमाडौं । “प्रथम शुक्र स्मृति भलिबल”को उपाधि आयोजक ए टिमले जितेका छन् । बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं.२ सुन्तलेमा शुक्र राना मगरको “प्रथम स्मृतिमा खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष भलिबलको उपाधि नं.२ सुन्तले आयोजक ए टिमले जितेका हुन् । बुधबारदेखि सुरु भएको खेलमा त्रियुगा न.पा.१५ उदयपुरलाई पराजित गर्दै आयोजक ए टिम उपाधि जित्न सफल भएका […]
खोटाङमा “प्रथम शुक्र स्मृति भलिबल” प्रतियोगिता सुरु, प्रथमले ३० हजार पाउने
खोटाङ् । बराहपोखरी गाउँपालिका वडा नं.२ सुन्तलेमा शुक्र राना मगरको प्रथम स्मृतिमा खुल्ला वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । वडा नं.२ सुन्तले निवासी गंगा बहादुर राना मगरको छोरा शुक्र राना मगर गतवर्ष पुस २४ गतेका दिन आफ्नै घरमा सामान्य ज्वरोका कारण मगरको निधन भएका थिए । मगर एक कुसल खेलाडी थिए । उनी […]
ए डिभिजन लिग: आज उपाधिको दाबेदार मनाङ र आर्मी क्लबवीच खेल हुँदै
७ पुस, काठमाडौं । शहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधिको दाबेदार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबवीच आज पहिलो खेल हुँदैछ । अर्को उपाधि दाबेदार मानिएको थ्री स्टार र पुलिसबीच दोस्रो खेल हुनेछ । दुवै खेल दशरथ रंगशालामा हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जनाएको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा नेपाल यू १५ र […]
लिभरपुल फिफा क्लब विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश
एजेन्सी, कतारको दोहास्थित खालिफा स्टेडियममा बुधबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले मेक्सिकन क्लब मोन्टेरीलाई २–१ गेलले पराजित गर्दै फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । वैकल्पिक खेलाडी रोवर्टाे फिर्मिन्होले निर्णायक गोल गरेपछि लिभरपुल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । उपाधिका लागि लिभरपुलले ब्राजिलियन क्लब फ्लामेङ्गोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फाइनल खेल शनिबार हुनेछ ।
२६ मंसिर, काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्ण पदक पाउने खेलाडीले ९ लाख, रजतले ६ लाख र कांस्यले ३ लाख दिने घोषणा गरेसँगै कीर्तिमानी पदक जितेकी गौरिका सिंहले ५९ लाख रुपैयाँ पाउने भएकी छन् । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत खेलमा गौरीकले चार स्वर्णको ११ लाखका दरले ४४ लाख पाउनेछिन् भने […]
को हुन् सागमा ४ स्वर्ण पदक बिजेता गौरिका सिंह ?
१३ औं सागमा गौरिका एक्लैले ४ स्वर्ण पदक नेपाललाई दिलाएकी गौरिका काठमाडौं पुख्र्यौली घर भएपनि बेलायतमा हुर्किएकी हुन् । उनका बुवा डा. पारस सिंह र आमा गरिमा राणासँग २ वर्षको उमेरमा बेलायती पुगेकी हुन् । ९ वर्षको उमेरदेखि पौडीमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेकी उनले १२ औं सागमा नेपालका लागि खेलेकी थिइन् । उनले गत वैशाखमा नेपालगञ्जमा […]
सागमा स्वर्ण जित्ने फुटबल प्रत्येक खेलाडीलाई ५ लाख
मंसीर २५, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा फुटबलतर्फ स्वर्ण जित्ने नेपाली टोलीका खेलाडीले जनही ५ लाख पाउने घोषणा गरेका छन् । सुजल श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीले मंगलवार भुटानलाई २-१ ले पराजित गर्दै १३औं सागको फुटबलको स्वर्ण जितेको थियो । यस पटक पुरस्कारमा वृद्धि हुने भनिएपनि पुरानै स्केलमा पुरस्कार पाउने भएपछि खेलाडीहरु […]
स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई ९ लाख दिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा
२५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई जनही ९ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् । बुधबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई जनही ९ लाख रुपैयाँ, रजत जित्नेलाई ६ लाख र कांस्य जित्नेलाई ३ लाख दिने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सागमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई बालुवाटारमा
मंसिर २५, काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीहरुलाई बधाई दिनको लागि बालुवाटार बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार दिउँसो सवा २ बजे बालुवाटार बोलाएको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । सचिवालयका अनुसार प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार घोषणा गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको तयारी […]